လက်ဆေးခြင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်လက်ဆေးစက်ရုံ
Flat Pack ကွန်တိန်နာအိမ်
သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ဂိုဒေါင်
သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ဂိုဒေါင်ဗီဒီယို
လက်ကားစျေးပေါစျေးအိတ်ဆောင်ဓာတုအိမ်သာ Mobil ...
လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သောအိတ်ဆောင်အများသုံးအိမ်သာ EPS sandwich အရူး ...
အိတ်ဆောင် China Prefabricric ရေချိုးခန်းဒီဇိုင်း ...
လျင်မြန်စွာတပ်ဆင်ထားသည့် Prefab အဆောက်အ ဦး ဆောက်လုပ်ရေးသံမဏိ ...
ပုံစံအသစ် Prefab ခေါက်တပ်ဆင်ထားသောကွန်တိန်နာအိမ်ရာ ...
၁။ လက်ဆေးခြင်းတတိယမျိုးဆက်ဘီးများ ၁။ ပိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်စွန့်ပစ်ရေကန်တွင်အဆို့ရှင်ပုတ်ပါ။ 2) ။ ဆေးဘူးနှင့်စက္ကူသေတ္တာကိုထည့်ရန်စွန့်ပစ် tank တွင်အပေါ်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အတူ။ 3) တစ်ချိန်တည်းမှာလူနှစ် ဦး အသုံးပြု .can နိုင်ပါတယ်။ လွယ်ကူသောသယ်ဆောင်ရန်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း tank တွင်ဘီးများပါရှိသည်။ ၂။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၃။ စီမံကိန်း ၄။ ထုပ်ပိုးခြင်းဖောက်သည်တွင်အထူးလိုအပ်ချက်များမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ထုပ်ပိုးနည်းလမ်းအတိုင်းထုပ်ပိုးပါမည်။ မင်းပြောင်းချင်ရင် ...
အပြင်ဘက်အဖြစ်အပျက်များအတွက် HDPE ပလပ်စတစ်လက်သုတ်လက်ကိုင်ဘူတာ
၁။ လက်ဆေးခြင်းဘူတာတတိယမျိုးဆက်တွင်ဘီးများ - ၀ န်ဆောင်မှု - ၁.၂၄ နာရီ - တစ် ဦး ချင်းအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများသည်ထိရောက်သောပံ့ပိုးမှုပေးသည်။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များအတွက် site ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တပ်ဆင်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာများအသင်းအတွက်။ ၃။ ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်မှစက်ရုံလည်ပတ်မှုသို့ဖောက်သည်များ၏လက်ခံမှုကိုစဉ်းစားပါ။ အမှာစာအတည်ပြုခြင်းမှကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်မှုသို့ 4.Excellent စောင့်ရှောက်မှု။ 2.Details 3.Project 4.Packing 5.Application 6.FAQ
၁။ လက်ဆေးခြင်းတတိယမြောက်မျိုးဆက်ဘီးများ ၁။ Rotomolding နည်းပညာဖြင့်လက်ဆေးခြင်းသည်အလွန်အားကောင်းပြီးအကြမ်းခံသည်။ 2. စင်ကြယ်သောရေတိုင်ကီနှင့်စွန့်ပစ်ရေရေတိုင်ကီကိုချိတ်ဆက်သို့မဟုတ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ 3. အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးပေါ့ပါး။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။ ၂။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၃။ စီမံကိန်း ၄ ။ ထုပ်ပိုးခြင်း ၅။ လျှောက်လွှာလျှောက်လွှာ။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ပြင်ပပန်းခြံ၊ ပြပွဲ၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများ၊ မိသားစုအသုံးပြုခြင်းအားသာချက်။
ပြင်ပအဖြစ်အပျက်အတွက်ပလပ်စတစ်ခရီးဆောင်စုပ် HDPE လက်လက်ဆေးဘူတာရုံ
၁။ လက်ဆေးခြင်းစခန်းကျွန်ုပ်တို့သည် China Mobile ရှိလက်အဝတ်လျှော်စက်များကိုအကြီးမားဆုံးထောက်ပံ့သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်အမှုပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ဖြင့် ၁၂ နှစ်တာကာလအတွင်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများတွင်ခရီးဆောင်အိမ်သာများ၊ လက်အဝတ်လျှော်စက်များ၊ modular အိမ်နှင့်ဒါ on.We သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်! ပစ္စည်း: HDPE အရွယ်အစား - ၈၀၀ မီလီမီတာ * ၄၇၀ မီလီမီတာ * ၁၃၆၀ မီလီမီတာအလေးချိန် - ၃၅ ကီလိုဂရမ်အိမ်သာအမျိုးအစား - အကျယ်အ ၀ န်း - လွတ်လပ်သောစွမ်းဆောင်နိုင်မှု - ၈၅L စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသိုလှောင်သည့်ကန်စွမ်းရည် - ၉၀ လီလက်လျှော်စက်ဟုတ်သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - ၅၁ ယူနစ် / ၂၀GP ...
လိပ်စာ:၇၀၄ ၇ ထပ်၊ အဆောက်အ ဦး ၄၊ Shenghe ရင်ပြင်အမှတ် ၃၊ Shenghe လမ်း၊ Nancheng လမ်း၊ Dongguan, Guangdong, China